I-YORG 0.11, umdlalo wokubaleka wooMatshini oMncinci | Ubunlog
I-YORG 0.11, umdlalo wokubaleka wesitayile seMicrosoft
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Yorg. Imalunga ne umdlalo ovulekileyo wokubaleka iphuhliswe ngu Ya2 kwaye isebenzisa iPanda3D. Singayifumana ifumaneka kwiWindows, OSX kunye neGnu / Linux. Kule nguqulo yamva nje (i-0.11), kwaye emva kweenyanga zomsebenzi, sinokubona inani elifanelekileyo lokuphuculwa, ikakhulu elijolise ekuphuculeni amava omsebenzisi ngexesha lomdlalo.
I-Yorg sisichazi 'Yorg ngumdlalo ovulekileyo womdyarho'. Njengomdlalo, ikhumbuza kakhulu oomatshini abancinci kunye nembono yayo ephezulu-ezantsi. Okwangoku umdlalo Isinika izithuthi ezisibhozo kunye neendlela ezisixhenxe ezinabadlali be-AI ukukhuphisana nabo, esinokuzonwabisa ngalo.
1 Iimpawu ngokubanzi zeYorg 0.11
2 Khuphela kwaye usebenzise iYorg
Iimpawu ngokubanzi zeYorg 0.11
U-Yorg unjalo IINTSHUKUMO Ikhowudi yomdlalo ikhutshwa phantsi kweGPLv3. Izinto zobugcisa zeYa2 zikhutshwa phantsi kweCC BY-SA. Umthombo weprojekthi unokufumaneka kwi GitHub.
Njengeemfuno zenkqubo, abaqulunqi bayasicebisa ukuba Siza kudinga i-2 GB ye-RAM kunye ne-1 GB ye-HD.
Ikhowudi sele ikhona kuthunyelwe ngokupheleleyo kwiPython 3.
Bane uhlaziyo lomdlalo. Siya kuba nakho ukukhetha iilwimi ezimbalwa ezikhoyo ukuguqulela umdlalo. Kolu luhlu, siya kuba nakho ukufumana iSpanish.
Phakathi kweenguqu ezininzi esiza kuzifumana kule nguqulo yamva nje, sinokufumana ifayile ye Inkxaso yolonwabo. Le yinto yokuba olu hlobo lomdlalo luba phantse lubalulekile. Inkxaso ayikhange ihlale kuphela kwiintshukumo, kodwa ikwenza ukuba kube nakho ukuziva iimpendulo xa sisebenzisa ulawulo olufanelekileyo.
I-Yorg iphuhliswa kusetyenziswa izixhobo ezahlukeneyo: IPanda 3D, Blender, Gimp, IPython kunye neBullet.
Kule nguqulo yomdlalo, mninzi umsebenzi osele wenziwe kwifayile ye- icandelo labadlali abaninzi. Ukongezwa kwabadlali abaninzi bendawo, okuya kuvumela abasebenzisi ukuba dlala isikrini esahluliweyo Kwikhompyuter enye ene ukuya kwi-4 abadlali. Ujongano lwe icandelo online. Umphuhlisi ucacisa ukuba eli nqaku lisalingwa, ukuze sikwazi ukufumana iibugs.
Un Inkqubo yamasuntswana kumdlalo. Le yinto ekhutshwe kule nguqulo kwaye eya kusenza sikwazi ukubona umsi ophuma kwimigulukudu, ukukhanya, izixhobo, njl. ... Iziphumo ezithile kunye nokusebenza komdlalo kuphuculwe ngenxa yenguqulo entsha yePanda3D iyasetyenziswa.
Imodeli yokuqhuba iphuculwe, ifuna ukwenza kulula ukulawula imoto kuneenguqulelo zangaphambili.
La ingqiqo Abakhuphiswano nabo bafumene umsebenzi omninzi.
Abadali basikhumbuza ukuba kufuneka khubaza ukufiphaza kunye nokunciphisa inani lezithuthi oza kuzidlala koomatshini abacothayo.
Ezi zezinye ze Iimpawu zomdlalo. Zonke zinokuboniswana ngokweenkcukacha ezingaphezulu iwebhusayithi yeprojekthi.
Khuphela kwaye usebenzise iYorg
Siza kuba nakho ukuvavanya lo mdlalo ukonwabisa kwi-Ubuntu. Asizukufumana ngaphezulu yiya kwi iphepha lokukhuphela nguYORG 0.11. Kanye kuyo kuya kufuneka uskrole ezantsi ukufumana iqhosha lokukhuphela. Siza kufumana iindlela ezimbini. Kulo mzekelo ndiza kusebenzisa leyo inokubonwa kwisikrini esilandelayo.
Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, sinayo kuphela unzip iphakheji. Yonke into esiyifumana apho sinokuyivula kwifolda.
Emva koko kufuneka siye kwiifayile zomdlalo kwaye Khangela indawo enokuphunyezwa enokubonwa kwisikrini esingentla. Le fayile ibizwa ngokuba "Yorg”Kwaye kuya kufuneka sicofe nje kabini ukwazisa umdlalo.
Ndiyathemba ukuba kwiinguqulelo ezizayo baya kuthatha isigqibo sokongeza izixhobo, iimoto ezininzi kunye neendlela, apho, ngenxa yophuhliso lwabo olulungileyo, nabani na ofuna umdlalo wokubaleka angaqhubeka nokonwaba. Ukuba unomdla kwi inkxaso uphuhliso lomdlalo, Abenzi bayo bafumaneke kubo bonke abafuna ukufaka isandla iphepha elinye apho bachaza indlela yokwenza ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-YORG 0.11, umdlalo wokubaleka wesitayile seMicrosoft
Ukuba sesichengeni eWireshark kunokusetyenziswa gwenxa kude ukuba yonakalise inkqubo
I-Linus Torvalds isungula ingxelo ezinzileyo yeLinux 5.3, uhlaziyo olunezinto ezininzi ezintsha